Oge zuru ezu - arịa ụlọ dị n'ịntanetị maka ụlọ gị - Dafne Italian Design
Home shop anọ
Home / shop / Nọgide
Ngosipụta 1-50 nke nsonaazụ 470
Omuma dị (386)
Oge oge a (122)
Ntanet TV - Agba: agba chaa chaa - TV guzoro 1 ọnụ ụzọ na oghere oghe na nkwụchasị osisi. Ebe oghere nwere oghere iko - Ihe ntụgharị: cm. 140 x 43 x 56h - (STP)
276€ Aggiungi al carrello
Akwụkwọ Ụmụaka maka nwa agbọghọ ma ọ bụ nwa - ma mara mma - Akwụkwọ nke nwere akụkụ ọnụ, ụlọ atọ - Wall Ndị: 46 cm H 185 cm 33 cm - [Usoro: Dafne-Classica] - (DF11)
Mpempe akwụkwọ - Agba: pearl elm na chacha acha ọcha - 2 n'akụkụ ọnụ ụzọ. Ejikọtara ihe ndị dị na nchịkọta a na ụdị ọ bụla. Ejiri usoro mmeghe na-ebugharị, ụzọ dị iche iche nwere eriri dị n'ime - Mpempe: cm. 126 x 42 x 76h - (STP)
Ntanet TV - Agba: oxide - TV guzoro 3 Ọnụ ụzọ na oghere oghe - Nrụpụta: cm. 138 x 42 x 56h - (STP)
353€ Aggiungi al carrello
Onyonyo TV - Agba: Simenti - TV guzoro 3 Okporo ụzọ na oghere oghe - Nlereanya: cm. 138 x 42 x 56h - (STP)
Mpempe akwụkwọ - Agba: chacha achacha - Oghere 3 dị n'akụkụ ya na ntinye ntinye na ntinye na ntinye osisi. N'ibu ihe ntinye 2 na ihe odide nke ime - Nri: cm. 160 x 43 x 86h - (STP)
Ihe ngosi - Agba: chacha acha - Igbe ngosi 2 ọnụ ụzọ na mmetụta osisi. Ejikọtara ya na ihe dị n'ime ya n'otu nkwụsị ahụ dị ka ihe owuwu - Ihe ntụgharị: cm. 61 x 43 x 162h - Ka ebunye (STP)
Mpempe akwụkwọ - Agba: pearl elm na glossy ọcha - Madia 2 ọnụ ụzọ na oghere oghe. Ejikọtara ihe ndị dị na nchịkọta a na ụdị ọ bụla. Ejiri usoro nhazi mmeghe, a na-ekewapụta ogwe ihe ntanye n'ime akụkụ 4 symmetrical - Measures: cm. cm. 186 x 42 x 76h - (STP)
Mpempe akwụkwọ - Agba: acha chacha acha - 4 ante. Ejikọtara ihe ndị dị na nchịkọta a na ụdị ọ bụla. Ejiri usoro mmeghe na-ebugharị, ụzọ dị iche iche nwere eriri dị n'ime - Mpempe: cm. 102 x 43 x 162h - (STP)
Akwụkwọ maka ime ụlọ maka nwa nwoke ma ọ bụ nwa - Kwesịrị maka ụlọ nwa - A Akwụkwọ Akwụkwọ na shelf ise na ihe magnet - Akụkụ Akwụkwọ: 53 cm H 180 cm 35 cm - [Series: Dafne-Metal] - (DF11)
Mpempe akwụkwọ - Agba: Ụcha - Ndabe 3 Cubic Effect Doors. A na-eji ọnụ ụzọ ntanetị emeghe - nke nke oge a - ihe: cm. 181 x 43 x 86h - site n'Ugwu (STP)
472€ Aggiungi al carrello
Mpempe akwụkwọ - Agba: ọcha - A na-ejikarị aka n'èzí. Ọnụ ụzọ ọ bụla nwere eriri dị n'ime. Ihe a na-achọ mma n'èzí na-enye ihe ngosi dị mfe ma dị mma - Nzuzi: cm. 121 x 42 x 111h - (STP)
473€ Aggiungi al carrello
Onyonyo TV - Agba: ezigbo ojiji ọchịchịrị - TV guzoro oghere 2 na oghere oghe na-arụ ọrụ osisi. Ọnụ ụzọ ọ bụla nwere eriri dị n'ime. Ihe a na-achọ mma n'èzí na-enye ihe ngosi dị mfe ma dị mma - Nzuzi: cm. cm. 202 x 45 x 53h - (STP)
Mpempe akwụkwọ - Agba: pearl elm na chacha acha ọcha - 4 n'akụkụ ọnụ ụzọ. Ejikọtara ihe ndị dị na nchịkọta a na ụdị ọ bụla. Ejiri usoro mmeghe na-ebugharị, ụzọ dị iche iche nwere eriri dị n'ime - Mpempe: cm. 126 x 42 x 136h - (STP)
Mpempe akwụkwọ - Agba: peel elm na nke na - acha ọcha - 2 n'akụkụ ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ 3. Ejikọtara ihe ndị dị na nchịkọta a na ụdị ọ bụla. Ejiri usoro mmeghe na-emegharị ihe, ọnụ ụzọ nwere ihe dị n'ime ya. Ihe ntanetị dị na metal chromed - Nzuzi: cm. 186 x 42 x 76h - (STP)
492€ Aggiungi al carrello
Tris Coffee tables - Dimensions: L 58 P 34 H 58 cm - Matryoshka stackable - Omuma ụdị decorations - Nnukwu osisi walnut - 100% Mere na Italy - polishing mere na mmiri na agba na shellac agwụ - mma bee karịa osisi na zuru okè sizinin - (DF18)
Njikwa / Extendable tebụl - Glossy na-acha ọcha - Akụkụ cm. 90 x 50 x 78h
507€ Aggiungi al carrello
Njikwa / Okpokoro okpokoro okpokoro - Akụkụ cm. 90 x 50 x 78h
Nchịkọta / Extendable Table - Ash Gray - Dimensions cm. 90 x 50 x 78h (Detuo)
Mpempe akwụkwọ - Agba: na-acha ọcha fir - Oghere 2 dị n'akụkụ ya na ndị 3 na-eji ihe dị mfe ma dịrị na ntinye arụ ọrụ zuru oke. Ọnụ ụzọ nwere ihe dị n'ime ụlọ - Ihe ntụgharị: cm. 210 x 43 x 86h - (STP)
514€ Aggiungi al carrello
Mpempe akwụkwọ - Agba: oghere anụ ahụ na-acha ọcha - 2 sideboard na oghere oghe. Onu o bula nwere onu ogugu ozo na akwara aka nke nyere ya ihe nke oge a, nke kachasi ihe di iche - Ihe nkedo: cm. 120 x 34 x 127h - (STP)
Tris Coffee tables - Dimensions: L 58 P 34 H 58 cm - Matryoshka stackable - Classic style inlay decorations - Briar wood - 100% Mere na Italy - na-eme ka polishing mee stains na shellac na-emecha - mma ịkpụ karịa osisi na zuru okè sizinin - (DF18)
529€ Aggiungi al carrello
Tebụl kọfị nke Tris - Akụkụ: L 58 P 34 H 58 cm - Nkọcha nke Matryoshka - Nkọwa ndị na-acha na kpochapụ - Akpan osisi wolf - 100% Emere na Itali - a na-eji polishing mee stains na shellac - mma karịa osisi na oke Nri - (DF18)
Mpempe akwụkwọ - Agba: oghere na-acha ọcha na-acha ọcha - Akụkụ ya na ọnụ ụzọ lacquered kwesịrị ekwesị - Ngwaahịa dị na foto bụ ngwakọ - Ebere iji nye ọrụ site na nchikota nke ọnụ ụzọ, ndị na-edepụta na akwụkwọ ndị na-emeghe - Izucha nke aka ahụ dị n ' nke ihe owuwu - Nri: cm. 96 x 34 x 128h - Ka ebunye (STP)
545€ Aggiungi al carrello
Onye na - ejide ekwentị - Akụkụ: L 46 P 28 H 66 cm - Ejiji ndị a na - ahụkarị - Nkịtị wolf - 2 drawers - otu shelf - 100% Mere na Italy - nchara polishing na mmiri na agbacha akwụkwọ - mma ịkpụ karịa osisi na ezumike zuru okè - (DF18)
Ogwe ọnụ ọgụgụ 1 nke na-eji ekwentị - 1 cm - 58 cm - H 35 cm - 82 Mc - Ụdị klaasị - 0,22% Osisi - Oghere na-eme ka ọkpụkpụ tanganyika - 100% Mee na Italy (SF100)
558€ Aggiungi al carrello
TV guzoro - Agba: ukpa - 2 TV guzoro na oghere oghere ọnụ ụzọ. Ejiri ya na mpempe a pịrị apị ma mechie ụzọ. Uwe aka na mkpọchi na ígwè - Mpempe: cm. 91 x 54 x 80h - Ka ebunye (STP)
Mpempe akwụkwọ - Colored: oxide - Sideboard 2 ọnụ ụzọ, 2 drawer na oghere oghe - Site na ngwa ngwa na linear imecha niile na nchara nke oge a - A na-eji ụzọ nchekwa dị iche iche mechie ọnụ ụzọ - Usoro: cm. 184 x 42 x 86h - (STP)
583€ Aggiungi al carrello
Mpempe akwụkwọ - Agba: ihe - Oghere 2, 2 drawer na oghere oghe - Site na ntinye ngwa ngwa na nke linear niile na ngwụcha nke oge a - A na-eji ibo dị iche iche rụọ ibo ụzọ - Ihe nrịba: cm. 184 x 42 x 86h - (STP)
Mpempe akwụkwọ - Agba: oghere anụcha na nke na-acha ọcha - Sideboard 2 ọnụ ụzọ, 2 drawer na oghere oghe. Ejiri ya na oghere nke ọ bụla n'ime ọnụ ụzọ ọ bụla, nke na-emechi ihe nkedo na ihe ntanetị nke na-enye ya oge nke oge a, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntakịrị ntakịrị - Ihe ntụgharị: cm. 180 x 45 x 79h - (STP)
Mpempe akwụkwọ - Agba: ugwu mgbawa na osisi oak - Oghere 2, 2 drawer na oghere oghe. Ejiri ya na oghere nke ọ bụla n'ime ọnụ ụzọ ọ bụla, nke na-emechi ihe nkedo na ihe ntanetị nke na-enye ya oge nke oge a, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntakịrị ntakịrị - Ihe ntụgharị: cm. 180 x 45 x 79h - (STP)
Ibo ụrọ cupboard - Agba: ukpa - A na-edozi nke ọma n'ime osisi, ihe osise na etiti ọnụ ụzọ na-eme ka ebe ahụ dị elu. Ejiri aka na mgbochi - Mgbochi: cm. 93 x 35 x 106h - (STP)
591€ Aggiungi al carrello
Mpempe akwụkwọ - Agba: ọcha larch - Sideboard 4 ante. Na-egosi na ekele na akara ya dị mma ma gburugburu ma nke oge a. A kwadebere ọnụ ụzọ ọ bụla na 1 n'ime ihe dị n'ime ụlọ ma jiri aka na-arụ ọrụ n'ime osisi - Ihe ntụgharị: cm. 126 x 42 x 136h - (STP)
Mpempe akwụkwọ - Agba: oxide - Sideboard 2 ọnụ ụzọ na oghere oghe - Site na nhazi ngwa ngwa na nke linear niile na ngwụcha nke oge a - A na-eji ibo dị iche iche rụọ ibo ụzọ - Usoro: cm. 110 x 42 x 144h - Ka ebunye (STP)
602€ Aggiungi al carrello
Mpempe akwụkwọ - Agba: ihe - Sideboard 2 ọnụ ụzọ na oghe oghe - Site na ntinye ngwa ngwa na nke linear niile na ngwụcha nke oge a - A na-eji ibo dị iche iche mechie ọnụ ụzọ - Nrụpụta: cm. 110 x 42 x 144h - (STP)
n. 1 Consolle, otu drawer, agba agba ọchịchịrị - akụkụ: 105 cm - 40 cm - H 88 cm - 0,40 Mc - Ejiji kpochapụ - 100% Osisi - Atụmatụ dị iche iche: Tanganyika na-atụgharị n'akụkụ akụkụ - Tops, ala, na Tanganyika plated MDF Drafts n'akụkụ na siri ike Fir - Akụkụ ihu n'ihu na poplar plated na ukpo nke mba na inlay - Legs na solid toulipier - 100% Mere na Italy (GF17)
Ejiri oche eji eme ihe, ụdị kpochapụ (cm. L. 66 - H. 104 - P. 64) (TVG)
613€ Aggiungi al carrello